Madaxweyne Farmaajo oo soo gaba gabeeyey booqashadii Dalka Sudan+Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo oo soo gaba gabeeyey booqashadii Dalka Sudan+Sawirro
Madaxweyne Farmaajo oo soo gaba gabeeyey booqashadii Dalka Sudan+Sawirro
Muqdisho(SONNA) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaba-gabeeyey booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku joogay dalka Sudan.
Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiiri ayaa kusoo saagootiyey Madaxweynaha iyo wafdigiisa qaybta martida gaarka ah ee garoonka diyaaradaha calaamiga ah ee magaalada Khartum.
Madaxweyne Farmaajo ayaa galinkii hore waxa uu booqday Xarunta Jaamacadda Caalamiga ee Africa oo ay dhigtaan ardayda Soomaaliyeed ee ugu badan ardayda wax kabarata Jaamacadaha ku yaalla dalka dibaddiisa.
Guddoomiyaha Jamacadda Caalamiga ah ee Africa Dr.Kaamil Cubayd,barayaasha Jaamacadda, ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa halkaas ku soo dhaweeyey Madaxweynaha.
“Taariikh lama illaawaan ah ayaad ku leedihiin sooyaalka waxbarashada Soomaaliya, waxa aad na garab istaagteen xilli aysan ka jirin dalkayaga nidaam waxbarasho iyo hannaan doowaladeed, waxaan rajaynaynaa in aad sii laba laabtaan dadaalkaas” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale Salaadda Jimcaha kula tukuday Masjidka Jaamacadda boqolaal ka mid ah ardayda wax ka barata dalkaas.
Previous articleBooliska Talyaaniga oo qabtay qalab Militari oo loo dhoofin lahaa Soomaaliya
Next articleGantaalkii ugu dambeyeey oo ridda dheer oo ay tijaabinayso Pyonyang